HORDHAC: Liverpool v West Ham United – Gool FM
HORDHAC: Liverpool v West Ham United
( Premier League ) 12 Agoosto 2018. Liverpool ayaa soo dhaweyn doonta kulankeeda kowaad ee horyaalka Premier League dhigooda West Ham.
Cayaarta ka dhici doonta garoonka Anfield ayaa lagu arki doonaa wajiyaal cusub oo ay lasoo saxiixdeen labada naadiga oo xagaagan si weyn kaga soo adeegtay suuqa kala iibsiga.
Garsooraha: Anthony Taylor
Liverpool ayaa shaki la’aan weyneysa Dejan Lovren, halka saxiixa cusub ee Fabinho uu shaki ku jiro sababtoo ah waa mid xanuun qaba.
Goolhayaha Brazil Alisson ayaa safan doona kulankiisa ugu horreeya Premier League, sido kalana waxaa isna kasoo muuqana safka kooxda Naby Keita.
West Ham ayaa siin doonta dhawr cayaariyahan oo ay lasoo saxiixatay kulankooda kowaad, waxaana kamida Jack Wilshere, Felipe Anderson iyo Carlos Sanchez.
Laacibka garabka ka dheela ee kasoo jeeda dalka Ukraine Andriy Yarmolenko ayaa ku dhibtooday inuu taam noqdo sababtoo ah wuxuu qabaa dhibaatooyin sinta iyo bowdada ah.
Liverpool ayaa badisay seddaxdii kulan ee u dambeysay oo ay wajahday West ham, iyagoo dhaliyay afar gool kulankiiba.
West Ham ayaa mar kaliya ku badisay garoonka Anfield 45 mar oo ay soo booqatay ciyaara horyaalka sare 12 jeer barbaro ayay la gashay halka 32 jeerna laga badiyay guusha ay ku gaareen waa ciyaar ku dhamaatay 3-0 oo dhacday bishii August 2015-kii.
Liverpool waa guuldaro la’aan kulamadii ay u dheeshay horyaalka garoonkeeda xagaagii hire 12 guul ayay ku gaartay 7 kulanna barbaro, waxay ku dhaliyeen 45 gool halka kaliya looga dhaliyay 10 gool.
Labadii xili cayaareed ee lasoo dhaafay kulamadoodii furitaanka kooxda Liverpool ayaa waxaa kasoo baxay 13 gool – kulanka kowaad waxay 4-3 kaga badiyeen Arsenal laba sano kahor iyo 3-3 barbaro oo ay la gashay Watford bishii August ee sanadkii tagay.
West Ham ayaa kaliya badisay seddax kulan oo cayaaraha banaanka ah xagaagii lasoo dhaafay 6 barbaro ayay gashay halka 10 kulana la garaacay.
Kooxda lagu naaneyso Hammers ayaa qasaartay kulamadooda furitaanka horyaalka Premier League 11 jeer, waana mid ka badan koox kasta.
“Anaga xiligan ujeedkeenu ma ahan koobka horyaalka Premier League”…Pep Guardiola
HORDHAC: Arsenal v Manchester City, Emery oo Maraya Tijaabadiisii ugu horreeysay ee Horyaalka Ingiriiska